Vaovao - Fahaizana famoretana
Faritry ny gorodona
Harbika/Talata amin'ny efitra fandroana
Talantalana lamba famaohana
Fanampiana efitra fandroana
Atrikasa Production Line
Nanomboka tamin'ny Septambra, niparitaka tany amin'ny faritany maherin'ny folo ny tranganà fahatapahan-jiro ao an-tokantrano ao anatin'izany ny Heilongjiang, Jilin, Guangdong ary, Jiangsu. Tamin'ny tolakandron'ny 27 septambra, nanambara ny State Grid Corporation of China fa raha jerena ny toe-draharaha misy amin'izao fotoana izao, dia handray fepetra feno sy handray fepetra maro izy, ary hiezaka hiady amin'ny ady mafy amin'ny antoka famatsiana herinaratra, antoka fototra. ny fitakiana hery fiveloman'ny olona, ​​ary ialao ny mety hisian'ny famerana ny famatsiana herinaratra. Tazony amin'ny fomba hentitra ny fototry ny fiveloman'ny olona sy ny fampandrosoana ary ny filaminana.
Tsy vitan'ny hoe miantraika amin'ny famokarana orinasa indostrialy ny trangan-javatra amin'izao fotoana izao, fa misy fiantraikany amin'ny fiainana andavanandron'ny mponina ihany koa. Ny antony intuitive indrindra amin'ny famatsiana herinaratra amin'izao fotoana izao dia noho ny fitakiana herinaratra tery vao haingana, ny orinasan-tserasera dia nandray fepetra mba hiantohana ny fiarovana ny herinaratra. Mifanohitra amin'ny fihenan'ny famatsiana, hatramin'ny nipoahan'ny valan'aretina satroboninahitra vaovao, dia voarara tanteraka ny famokarana any ivelany, ary nihatsara hatrany ny fomba fanondranana ny fireneko. Ny famokarana orinasa indostrialy dia nampitombo ny fitomboan'ny fanjifana herinaratra haingana, izay nampitombo ny tsy fifandanjana eo amin'ny famatsiana herinaratra sy ny tinady. Amin'ny fomba farany, ny fomba "famerana ny famatsiana herinaratra" dia nampiasaina mba hamenoana ny banga sy hiantohana ny fiarovana ny rafitra herinaratra. Mety hiitatra bebe kokoa ny isan'ny fameperana herinaratra.
Ny fahatapahan-jiro dia manampy amin'ny fanerena ny fahafaha-mamokatra. Noho ny valan'aretina dia betsaka ny baiko ara-barotra avy any ivelany no nirohotra nankany Shina, ary orinasa maro no nampihena ny vidiny mba hahazoana baiko. Na dia betsaka aza ny baikon'ny varotra any ivelany, mihena ny tombom-barotra azon'ny orinasa miaraka amin'ny fihenam-bidy. Raha vao mihena ny baikon'ny varotra any ivelany, ireo orinasa ireo dia tsy maintsy miatrika ny loza ateraky ny bankirompitra. Ny fampihenana ny herin'aratra dia mety hampihena ny mety hisian'ireo orinasa ireo ho bankirompitra, satria ny famerana ny herinaratra dia hahatonga ny orinasa hametra ny famokarana, ka hampihena ny fahafaha-mamokatra, ahafahan'ny orinasa mahita tsikelikely ny vokatra fototra, mampiroborobo ny fiovan'ny orinasa, ary mety kokoa amin'ny fampandrosoana ny orinasa.
Fotoana fandefasana: Jun-03-2019
Ny fironana amin'ny fampandrosoana ho avy amin'ny trano ...
Ny fiantraikan'ny fiakaran'ny vidin-javatra sy ny...
Faritra Indostria Dongyang, Tanànan'i Hongsan, Tanànan'i Caitang, Distrikan'i Chaoan, Chaozhou
Antsoy izahay izao: 0086-13380473107